Teeknooloojiin Diijitaalaa hunda hammataa fi walga’uu akka qabu Preezdaant Saahilawarq waamicha dhiyeessan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Teeknooloojiin Diijitaalaa hunda hammataa fi walga’uu akka qabu Preezdaant Saahilawarq waamicha dhiyeessan
On Mar 18, 2021 126
Finfinnee, Bitootessa 9, 2013 (FBC) – Teeknooloojiin Diijitaalaa hunda hammataa fi walga’uu akka danda’u biyyoonni cimanii akka hojjetan Preezdaant Saahilawarq waamicha dhiyeessaniiru.
Mariin ‘Hammattummaa Diijitaalarratti’ xiyyeeffate intarneetiin gaggeeffameera.
Waltajjicha haasawaan kan banan Preezdaantiin FDRI Saahilawarq Zawdeen kutaan addunyaa walakkaan Teeknooloojii Diijitaalaa ala ta’uun isaanii nama gaddisiisa jedhan.
Teeknooloojii Diijitaala hunda hammatee fi hunda uwwisu taasiisuuf biyyoonni cimanii hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.
Mootummaan Ityoophiyaa hammattummaa Diijitaalaa hojiitti hiikuuf murannoo qabaachuu mirkaneessaniiru.
Kana dhugoomsuuf Abbaan Taayitaa Kominikeeshinii fi to’annoo Teelee Komiiniikeeshiinii Biyyaalessaa hundaa’uu ibsaniiru.
Kaayyoon qophii kanaas dubartoonni, daa’immaan, qaama miidhamtoonnii fi kutaan hawaasaa humna hin qabne damicharraa fayyadamoo akka ta’an taasiisuufi jedhan.
Marii ‘Imala gara Diijitaala hammataa haaraatti’ jedhuun qophaa’eerratti hoggantoonni mootummaa, itti gaafatamtoonni dhaabbileen idil addunyaa fi ogeeyyiin teeknooloojii biyyoota garaagaraa hirmaataniiru.
Konfaransii misooma Teeleekoomii Idil Addunyaa bara dhufu Ityoophiyaan kan qopheessitu yoo ta’u, hojiileen qophii duraa hojjetamaa jiraachuu ragaan Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojiirraa argame ni muul’isa.
Ityoo Teeleekoom naannoo Kibbaa damee Kibba Lixaatti tajaajila 4G LTE Advaansiid…
Ityoophiyaatti agarsiifni qorannoo Intalajansii Artiifishaalii jalqabaa baname
Bilbillii appilikeeshinii daqiiqa 3 keessatti ijaa ilaaluun vaayrasii koroonaa qoratu…
Dhaabbanni Facebook fuulawwan Gibts taa’anii Ityoophiyaarratti xiyyeeffachuun…
Ityoo Teeleekoom naannoo Kibbaa damee Kibba Lixaatti…
Ityoophiyaatti agarsiifni qorannoo Intalajansii…
Bilbillii appilikeeshinii daqiiqa 3 keessatti ijaa ilaaluun…